Par Taratra sur 17/07/2021
Sosialim-bahoaka? Izay no anisan’ny mampiaka-peo ny mpanohitra amin’izao. Tsy misy inona vitan’ny fitondram-panjakana, hono. Na manao aza izy fa tsy laharam-paha­mehana amin’ny vahoaka: sekoly manara-penitra, hopitaly manara-penitra, kianja manara-penitra… Ny fiatrehana ny fiainana andavanandro izao no hoe zava-dehibe sy maika amin’ny vahoaka? Eo ny fidangan’ny vidim-piainana, ny tsy fisian’asa, ny tsy fandriampahalemana… Manginy fotsiny amin’izany ny tsy fanjarian-tsakafo, ny ady tany, ny olana amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany… Mby aiza?
Tena mizaka sy miaritra ny tsy eran’ny ainy amin’ny fahasahiranana ny vahoaka ifotony? Tsy vaovao fa efa hatramin’izay… Izay hatrany koa no hirahirain’ny mpanao politika sasany, indrindra ny mpanohitra. Hanozongozonana ny fitondram-panjakana ho tsy mahefa inona izany an-daniny; an-kilany, andranitana ny vahoaka hiandany amin’ny mpanohitra amin’izany hihetsika; eny, ho kivy amin’ny ataon’ ny mpitondra aza. Ny mahasaikatra amin’izany: tsy mihetsika ny valalabe… miandry, mangina aza. Mahazaka sa miandry ny farany? Na mahita sy manara-maso fa misy ny zava-bita…
Raha mitohy izao, ndeha atao hoe tsy miova ary tsy hiova ny fiainam-bahoaka ifotony; eny, na eo aza ny zava-bitan’ny fitondrana: ho tapitra ihany ny fe-potoam-piasana. Resaka ka atao ary tombantombana ihany izay. Sao misy tezi-dresaka? Na ahoana na ahoana, hotsaraina amin’ny ataony sy izay vitany ny mpitondra. Eo ny vahoaka hanapa-kevitra momba azy amin’ny fifidianana. Efa tokony hiroso amin’izay fanajana ny fahataperan’ny fe-potoam-piasana izay ny fialana eo amin’ny fitondrana? Na fandraisana fahefam-panjakana… Mba tsy fanakorontanana ny hoe fanoherana.
Zava-dehibe sy maika ary tsy azo odian-tsy hita àry ny sosialim-bahoaka hitsarana ny mpitondra amin’ny fifidianana manaraka eo; eny, na eo aza ny zava-dehibe. Ho amin’izay fitsinjovana sy fanatsarana ny fiainam-bahoaka izay tsinona izay rehetra ataon’ny mpitondra, ary eo ny vahoaka mitsara izay tsapany sy iainany. Mby aiza?